Redmi K20 ကိုမေလ ၂၈ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည် Androidsis
Redmi K20 တွင်တင်ဆက်သည့်ရက်စွဲရှိသည်
ရက်အနည်းငယ်အကြာကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် Redmi ရဲ့အဆင့်မြင့်နာမည်ရှိပြီးသား. တရုတ်တံဆိပ်မှရွေးထားသောနာမည်မှာ Redmi K20 ဖြစ်သည်, ဒီပထမ ဦး ဆုံးမော်ဒယ်အဘို့အ high-end အစိတ်အပိုင်းအတွင်းဖြန့်ချိ။ Snapdragon 855 ပရိုဆက်ဆာထည့်သွင်းထားတဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောလဟာလတွေအများကြီးကြားပြီးလအနည်းငယ်အကြာမှာပဲ။ ဤသည်တနင်္ဂနွေဒေတာရောက်ရှိလာခဲ့သည် ကိရိယာကင်မရာအကြောင်း.
အခုငါတို့သိပြီ ဒီ Redmi K20 ကိုဘယ်အချိန်မှာတင်ပြမယ်လို့မျှော်လင့်နိုင်သလဲ တရားဝင်။ တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်သည်တရုတ်တွင်တင်ဆက်မှုရက်စွဲရှိပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွှတ်တင်မှုအကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါ၊ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလဟာလများစွာရှိသည်။
ကျနော်တို့ကြာကြာစောင့်စရာမလိုပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောလဟာလတွေအရတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကိုမေလမှာဖြစ်မယ်။ မေလ ၂၈ ရက်သည်ရွေးချယ်သောနေ့ဖြစ်သည် အဆိုပါ Redmi K20 ၏တင်ပြချက်သည်။ ၎င်းသည်ဘေဂျင်းတွင်ပြုလုပ်မည့်ပွဲတစ်ခုတွင်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းနှင့်တွေ့မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုနံနက်ရှစ်နာရီ (စပိန်အချိန်) တွင်ကျင်းပသည်။
အခုငါတို့ဘာမှမသိဘူး ဒီဖုန်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပစ်လွှတ်အကြောင်းကို။ အချို့သောမီဒီယာများတွင် Pocophone F2 ဟုခေါ်သည့်အခြား Xiaomi အမှတ်တံဆိပ်ဒုတိယမြောက်မျိုးဆက် PXNUMX ကိုထုတ်လွှင့်မည်ဟုအချို့သောမီဒီယာများကယူဆကြသည်။ ယခုအချိန်အထိအတည်ပြုဘာမျှရှိပေမယ့်။
အကယ်စင်စစ်ဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုငါတို့သွား၏ ကုမ္ပဏီ၏တိကျသောအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိရန်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Redmi K20 သည်တရားဝင်သတ်မှတ်ပြီးသည်အထိကျွန်ုပ်တို့ရှစ်ရက်စောင့်ရမည်။ ဒါဆို Pocophone တံဆိပ်အောက်မှာတရုတ်အပြင်ဘက်ကိုတကယ်ထွက်မလားဆိုတာငါတို့သိမှာပါ။
ဤ Redmi K20 သည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်မည်ဟုကတိပေးပြီးအမှတ်တံဆိပ်သည် high-end range သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအလွန်ကောင်းသည်, အဆိုပါပဲ့မှာမှတ်ချက်7အတူ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကသူတို့ high-end အကွာအဝေးအဘို့ငါတို့အဘို့အသိုလှောင်ထားသောအရာကိုကြည့်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်စျေးကွက်မှာအများကြီးကြိုက်နှစ်သက်ခံရဖို့အလားအလာရှိပါတယ်ကတည်းက။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Redmi K20 တွင်တင်ဆက်သည့်ရက်စွဲရှိသည်
Android မှာသင်၏ SIM ကဒ် PIN နံပါတ်ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလဲ